Ogaden News Agency (ONA) – Norway: Shir qarsoodi ahaa oo Safiiradda Woyaanuhu qaban Lahayd oo fashilmay!!
Norway: Shir qarsoodi ahaa oo Safiiradda Woyaanuhu qaban Lahayd oo fashilmay!!
Oslo: Waxaa gelinkii dambe ee maanta barxadda hore ee Hoteelka SAS Blue Radisson marqudha is-qabsaday mudaaharaad ballaadhan oo ay kasoo qeyb galeen boqolaal qof oo kasoo horjeeday shir dhuumaaleysi ahaa oo ay rabtay inay qabato Safiiradda Woyaanaha u fadhida Sweden oo si naf la caarinimo ah asbuucan ku dhuumanaysay Oslo.
Kulankan qarsoodiga ahaa oo la rabay in loo qabto koox yar oo damiir laawayaal kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega, laguna qabto magaca dadyowga ku hoos dulman Itoobiya iyo ummadaha la gumeysto ee Ogaadeenya, Oromia, Canfar, Axmaaro iyo Gambella ayaa fashilmay kadib markii Booliisku amar ku baxsheen in la joojiyo shirkaas oo xanibay isu-socodka wadooyinka mara badhtamaha Oslo.
Shirkan dhuumashada ah ee la fashiliyey galabta ayaa ah kii labaad ee muddo laba asbuuc gudahood ah lagu fashiliyo dalka Norway.
Jaaliyadda S .Ogaadeenya ee dalka Norway oo aad ula socotay dhaqdhaaqyada ay sameynayaan kooxda Woyaanaha ee rajo beelka ah ayaa abaabushay mudaaharaadkan lixaadka leh, islamarkaasna awooday inay meel qudha isugu keento qowmiyadaha kala duwan ee ku kacsan taliska Tigreega ee ku dhaqan dalka Norway.
Dadka oo aad u cadhaysnaa kana xumaa waxa ka dhacaya dalkooda ayaa Booliisku xidheen kow iyo toban kamid ahaa mudaaharaadayaashii walow dadka loo sheegay in la sii dayn doono.
Saxaafadda Norway ayaa lagu arkayey goobta mudaaharaadka ka dhacayey. Waxana idiin soo gudbin doonaa Video-yo dhawr ah oo aan kasoo duubnay goobta.
Journalada wadanka Norwey ayaa lagu shaaciyay banaanbaxan xooga badan ee ka dhacay Norwey maanta waxaana u horeeya journalada oo si waafi ah uga faaloday journalka Degbaladet.no